ဒီဘရိုင်းရဲ့ မှတ်ချက်ပေးစကားကို ကြည့်ပြီး ဆိုးလ်ရှားကို လှောင်ပြောလိုက်ကြတဲ့ ယူနိုက်တက် ပရိသတ်မျာ - xyznews.co
ဒီဘရိုင်းရဲ့ မှတ်ချက်ပေးစကားကို ကြည့်ပြီး ဆိုးလ်ရှားကို လှောင်ပြောလိုက်ကြတဲ့ ယူနိုက်တက် ပရိသတ်မျာ
November 12, 2021 - by Editor
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေ​နေ့ တုန်းက အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ် ကွင်းထဲမှာ မန်စီးတီး အသင်းနဲ့ မန်ချက်စတာ ဒါဘီပွဲ ကစားခဲ့ရပြီး ဘိုင်လီ ရဲ့ own goal ၊ ဘာနာဒို ဆေးလ်ဗား ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေကြောင့်0–2ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရ ပါတယ် ။
အခုတော့ နိုင်ငံ့ ပွဲစဥ်တွေကို ကစားပေးဖို့ ဘယ်လ်ဂျီယံ မြေကို ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ မန်စီးတီး ကွင်းလယ်လူ ကယ်ဗင် ဒီဘရိုင်း က ဒါဘီ ပွဲအတွက် အသင်းရဲ့ ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှု အကြောင်း ဖွင့်ပြောခဲ့ပြီး ပြိုင်ဖက်အသင်းမှ ဘယ်လိုမျိုး ကစားမလဲဆိုတာ နည်းပြဖြစ်သူ ကြိုတင် မတွက်ဆနိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် နည်းပြ ဂွာဒီယိုလာ က ဆိုးလ်ရှား ဘယ်လိုမျိုး ကစားကွက်ကို ထုတ်သုံးလိမ့်မလဲဆိုတာ ကြိုတင် ခန့်မှန်းနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့တဲ့အတွက် သူတို့အားလုံးဟာ လေ့ကျင့်ရေး ကွင်းထဲမှာ နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆယ်မိနစ်သာ လေ့ကျင့်ခဲ့ပြီး ရပ်နားခဲ့ရကြောင်း ပြောခဲ့လိုက်ပါတယ် ။
” ပွဲစဥ် တစ်ပွဲ မတိုင်မီ ပြိုင်ဖက် ဘယ်လို ကစားလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ အပေါ် မူတည်ပြီး ကျွန်တော်တို့ဟာ နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြိုတင်လေ့ကျင့်မှုတွေ လုပ်ဆောင်လေ့ ရှိတတ်ကြပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ယူနိုက်တက်နဲ့ ပွဲ မတိုင်မီမှာတော့ ပက်က ‘ သူတို့ ဘယ်လိုကစားမလဲဆိုတာ ငါတို့ မသိကြဘူး ၊ စောင့်ကြည့်ရတာပေါ့ ‘ လို့ ပြောခဲ့ပါတယ် ”
” အဲ့တာပြီးတော့ ဆယ်မိနစ်လောက် လေ့ကျင့်အပြီးမှာပဲ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဥ်တွေကို ရပ်နားခဲ့လိုက်ရပါတယ် ။ ပြိုင်ဖက် အသင်း ဘယ်လိုမျိုး ကစားလိမ့်မလဲဆိုတာကို ပက် အမြဲလို ကြိုတင် တွက်ဆနိုင်လေ့ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ဒီတစ်ကြိမ်တော့ သူ မသိခဲ့ပါဘူး ။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့လည်း ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမလဲ မသိနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး ”
” ကျွန်တော်တို့ဟာ အမြဲတမ်း လုပ်နေကျအတိုင်း လုပ်ဖို့ အသင့်ရှိ နေခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ပက်ကတော့ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ခံစစ် ငါးယောက်ထားပြီး ကစားလိမ့်မလား ၊ ဒါမှမဟုတ်4ယောက်ထားပြီး ကစားလိမ့်မလား ၊ စိန်ပွင့် ကွင်းလယ်ထားမလား ၊ တိုက်စစ် သုံးယောက်ထိ ကစားစေမလား ဆိုတာကို မတွက်ဆနိုင်ခဲ့ပါဘူး ” လို့ ဒီဘရိုင်း က ပြောခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဘယ်လ်ဂျီယံမြေမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အဆိုပါ အင်တာဗျူး အစီအစဥ်ကို ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ ယူနိုက်တက် ပရိသတ် အချို့က လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားရဲ့ နည်းစနစ်ပိုင်း နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝေဖန် ထိုးနှက်မှု ၊ လှောင်ပြောင်မှုတွေ ကိုယ်စီလုပ်ဆောင်သွားခဲ့ကြတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
” ဒီဘရိုင်းရဲ့ မှတ်ချက်ပေးမှုကိုပဲ ကြည့်လိုက်ပါ ၊ တကယ့်ကို ရှက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အသင်းပါပဲ ”
” ငါတို့ အသင်း ဘယ်လို ကစားလိမ့်မလဲဆိုတာကို ငါတို့ ပရိသတ်တွေလည်း ကြိုမသိခဲ့လောက်ဘူးလို့ ထင်တယ်ဟ 😂 ”
” ငါတို့ အသင်း ဘယ်လို ကစားလိမ့်မလဲ ဆိုတာကို ငါတို့ ကိုယ်တိုင်တောင် ကြိုမတွက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးလေ ”
” ငါတို့ ဘယ်လို ကစားသွားကြမလဲဆိုတာ ငါတို့လည်း ကြိုမသိနိုင်ခဲ့ကြဘူးဟ ”
” ဒါဆို သူတို့ တကယ် လေ့ကျင့်ခဲ့ကြတာက စနေနေ့ အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ် ကွင်းမှာများလား ? လက်ရှိ ငါတို့ အသင်းရဲ့ အနေအထားကိုက တကယ့်ကို အသည်းကွဲချင်စရာပါပဲ ”
#OleOutOleOutOleOut ( တွစ်တာ အကောင့် နာမည်ပါ )
Previous Article ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်ကို ပြောင်းရွေ့ရန် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် စတားကို တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ လီဗာပူးဟီးရိုး မက်မာနာမန်
Next Article ခြေချော်သွားတဲ့ ဆွီဒင် ၊ အဆင့် ၁ ရောက်လာတဲ့ ပေါ်တူဂီ ၊ ကစားသမားတွေဘက်ကို မငဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ